India Civil Aviation Inoita Paradigm Shift kune e-Governance
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » India Civil Aviation Inoita Paradigm Shift kune e-Governance
avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • India Kupwanya Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau
India Civil Aviation kuvhurwa kwe e-platform
India Civil Aviation Minister Shri Jyotiraditya Scindia yakatanga nhasi eGCA - iyo e-Governance chikuva muDirectorate General yeCivil Aviation (DGCA).
Iyo purojekiti yakanangana nekuita otomatiki kwemaitiro uye mabasa eDGCA.
Gurukota reMubatanidzwa weCivil Aviation rinoti chirongwa ichi chinoratidza shanduko kubva pamitemo inorambidza kuenda kukubatana kunovaka.
Masevhisi anopihwa kune vakasiyana siyana DGCA vane chekuita sevatyairi vendege, kuchengetedza ndege, nezvimwe zvichave zviripo online paEGCA.
Pazuva iro India iri kupemberera "Azadi Ka Amrit Mahotsav" kurangarira makore makumi manomwe nemashanu eRusununguko, Shri Jyotiraditya M. Scindia, Union Minster of Civil Aviation, nhasi yakatsaurirwa eGCA, iyo e-hutongi chikuva mu. Directorate General weCivil Aviation (DGCA) kurudzi. Pachiitiko ichi, Munyori weCivil Aviation Shri Rajiv Bansal, Director General weCivil Aviation Shri Arun Kumar, uye nhengo dzakakurumbira dzeindasitiri yendege vaivepo.
Vachitaura pachiitiko ichi, Shri Scindia akataura kuti kutora chiono cheHon'ble Prime Minister weDhijitari India, DGCA yaita e-e-governance platform eGCA. Iyo purojekiti yakanangana nekuita otomatiki kwemaitiro uye mabasa eDGCA, iine masevhisi makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe anofukidza anosvika makumi manomwe muzana ebasa reDGCA riri kuitwa muzvikamu zvekutanga, uye masevhisi zana nemakumi mapfumbamwe nesere achavharwa mune zvimwe zvikamu. Akataura kuti iyi Single window platform ichaunza shanduko huru- kubvisa kusashanda zvakanaka, kuderedza kudyidzana kwevanhu, kuvandudza mishumo yemitemo, kuwedzera kujeka uye kuwedzera kubudirira.
Vakarumbidza DGCA nekuunza shanduko yeparadigm kubva pamitemo inorambidza kuenda kukubatana kunovaka. Minister vakati tichangotanga, rwendo rwusati rwapera, uye munguva pfupi pachava newongororo kuti tinzwisise kuti vatengi vakabatsirwa sei neshanduko iyi, uye chii chimwe chinoda kuitwa. Shri Scindia akataura kuti yedu ihurumende inoteerera, iyo, pasi pehutungamiriri hwaShri Narendra Modi, yakashandura dambudziko renguva yedenda kuita mukana.
Iyo purojekiti ichapa hwaro hwakasimba hweIT zvivakwa uye masevhisi ekupa masevhisi. Iyo e-platform inopa mhinduro-yekupedzisira-yekupedzisira inosanganisira akasiyana-siyana ekushandisa software, kubatana nemahofisi ese edunhu, "portal" yekuparadzira ruzivo uye nekupa online uye nekukurumidza masevhisi munzvimbo yakachengeteka. Chirongwa ichi chaizosimudzira kushanda zvakanaka kwemabasa akasiyana anopihwa neDGCA uye yaizoita kuti pave nekujeka nekuzvidavirira mumabasa ese eDGCA. Chirongwa ichi chakaitwa neTCS seMupi Webasa uye PWC seProjekti Management Consultant.
Panguva yekuvhurwa, Gurukota reMubatanidzwa weCivil Aviation rakaparurawo chidzidzo chenyaya, "DGCA inosimuka nendege yedhijitari," iyo inotora rwendo rweDGCA kuburikidza nekuitwa kweEGCA. Matambudziko akatarisana nawo neDGCA uye matanho akatorwa kugadzirisa izvi kuburikidza nepuratifomu yeEGCA akaiswa muchidzidzo ichi.
Iwo masevhisi anopihwa kune akasiyana siyana eDGCA vane chekuita seVatyairi vendege, Ndege Maintenance Engineers, Air Traffic Controllers, Air Operators, Airport Operators, Flying Training Organisations, Maintenance uye Dhizaini masangano nezvimwewo zvava kuwanikwa paEGCA online. Vanyoreri vanga vava kukwanisa kunyorera masevhisi akasiyana uye kurodha magwaro avo online. Zvikumbiro izvi zvaizogadziriswa neDGCA Vakuru, uye mvumo nemarezinesi zvaizopihwa online. Nharembozha app yakatangwa zvakare kune Vatyairi vendege neAircraft Maintenance Engineers kuti vaone maprofiles avo nekuvandudza data ravo pavanenge vachienda.
Chirongwa cheEGCA chiitiko chakakosha murwendo rweshanduko yedhijitari yeDGCA uye yaizopfumisa ruzivo rwevanobatanidzwa. Kune DGCA, inhanho munzira ye "kudekara kwekuita bhizinesi.” Shanduko iyi yedhijitari yaizounza kukosha kwakakosha kune chengetedzo yekudzora chimiro cheDGCA.